Sucuudiga miyuu bartilmaameedsanayaa dadkii u dooday Jamaal Khaashuqji? - BBC News Somali
Image caption Mr Bezos
"Baarayaasheena iyo tiro kale oo khubarro ah ayaa soo gebagebeeyay warbixino lagu kalsoon yahay oo ah in Sucuuudigu uu galaangal ku yeeshay telefanka Bezos, ayna ka heleen warbixino khaas ah," ayuu ku yiri warbixin uu ku daabacay y bogga Daily Beast.
Image caption Jamaal Khaashuqji
5 Arrimood oo aan wali laga ogaanin dilkii Jamaal Khaashuqji
Mr de Becker ayaa sheegay in warbixinta shirkada AMI sidoo kale lagu dalbaday inuu sheego in baaritaankiisa lagu soo gebogebeeyay in shirkadan aysan la xiriirin" Wax jabsasho ah oo loo geystay hanaankooda warqabadka ".
"Qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa la yaabi doono markii ay ogaadaan in dowladda Sucuudiga ay ku dadaaleysay inay dhibaateyso aasaasaha Amazon Jeff Bezon, tan iyo bishii Octobar, Kaddib markii wargeysku bilaabay inuu si joogta ah u daabaco warbixinada la xiiriira khaarijinta weriye Khaashoqji," ayuu yiri Mr de Becker
"Way cadahay in dhaxalsugaha boqortooyada Sucuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan uu u arko wargeyska Washington inuu yahay cadowga koowaad,".
Bishii Febraayo, wasiirka arrimaha dibedda ee Sucuudiga ayaa sheegay in dalkiisa" uusan wax lug ah ku lahayn " warbixintiii wargeyska National Enquirer reporting ee arrinta Mr Bezos.